Nhau - Ungaziva sei ehunhu hwekutarisira matambudziko ematombo epurasitiki anoumbwa nepasi?
1. Iko kudiwa kwezvinhu hazvigone kuisa kotesto munzvimbo yekutanga, nekuti mutengo unowanzoenderana nehunhu. Vazhinji vatengi veamateur vanongobvunza nezve mutengo wematombo epurasitiki epurasitiki zvigadzirwa kutanga, uyezve mhando, vachifunga kuti sekureba sekunge iri ibwe repurasitiki, uye inogona kushandiswa nguva dzose. Izvi zvinobvumira vatengesi vasina hunhu kutora mukana wemitengo yakaderera kukwezva vatengi. Vatengi vachakurumidza kuwana matambudziko ehunhu, asi kazhinji zvigadzirwa zvakadaro hazvibvumirwe, zvichikonzera kurasikirwa kusingakoshi kwebasa revatengi. Huru mbishi zvigadzirwa zveSPC yekudyira ndeye polyvinyl chloride uye poda yeibwe. Polyvinyl chloride inochengetedza zvakatipoteredza uye isiri-chepfu inovandudzwa sosi patembiricha yemukati. Dombo poda chinhu chechisikigo chine zero formaldehyde, inova inochengetedza zvakatipoteredza. Iyodombo repurasitiki rinoumba pasi yekugadzira mutsara chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yezvivakwa. Iro dombo repurasitiki rinoumbwa pasi rinodaidzwa zvakare kuti ibwe-epurasitiki pasi mataira. Zita rakarongeka rinofanira kunge riri "PVC vinyl pasi". Iyo mhando nyowani yepasi yakagadziridzwa neepamusoro-soro, yepamusoro-tech tsvagiridzo nekusimudzira. Iyo yekushongedza zvinhu inoshandisa yakasikwa marble poda kuti iite yakasimba base dura ine yakakwira density uye yakakwira fiber network dhizaini, uye iyo yepamusoro yakafukidzwa neiyo yepamusoro yekupfeka-inoshingirira polymer PVC kusakara-isingagadzirike dura, iyo inogadziriswa kuburikidza nemazana enzira.
2. Zvinoenderana neazvino ongororo yemamiriro ekuvandudza ezvigadzirwa zvematombo-epurasitiki uye kutengesa kwepamhepo kwemakambani epasi, mutengo wekutora hausi wakachipa semazita akati wandei ekutsvagisa: A. Shandisa zvimwe zvakapfava uye zvakapfava zvinhu kugadzira pasi. kusvika kune yakaderera indasitiri chiyero uye kusvika kune yakajairwa nhanho Iyo inotakura-inotakura inokwanisa zvinodiwa; B. Imwe cinder kana zvimwe zvisina kuchena zvinoenderana zvinozadzwa mumidziyo yepasi. Nekuda kwehurongwa husina kutsarukana, pachave nemabhuru asina kuchena kana masimbi anodonha kana achicheka, ayo asingangoite kuti pasi inyorove, asiwo yakaremara zvakapusa, uye haigone kusvika pamutoro. Kudiwa; C. Shandisa zvinonamira zvakasiyana, nekuti pane dambudziko nehunhu hwemhando yepamusoro uye nekushandisa kwakawanda kweglue, pane mutsauko wemitengo usingadzivisike, mashandiro akadaro anoita kuti pasi veneer ifuratire uye kubhowa uye kutsemuka; D. Uchishandisa isina moto bhodhi kana yakatetepa yakajairika sevhenekeri, iyo isina moto bhodhi haigone kuwana anti-static uye abrasion kuramba, uye iri nyore kwazvo uye yakatsemuka; E. Pfungwa inorerutswa nyore nyore nevatengi, zvishongedzo zvepasi zvakajairwa zvisingaenzaniswi zvishongedzo, mabhureki uye matanda hazvina basa, uye muviri wese unoumbwa mushure mechidziviriro chishandiso chiri nyoro uye kune mukana wekudonha.
Iyo SPC Floor Production Line yakapihwa neKEPT INDUSTRY inopawo vatengi mhinduro dzekubatsira vatengi kushandisa indasitiri zvakajairika zvinhu kuti vawane kugadzikana kwemhando uye inoshanda kudzora mutengo.
Ndapota taura nesu kuti tibvunze nezve EIR Pamhepo SPC Floor Kugadzira Machine, kutengesa kwedu kuchapa yakanakisa kupihwa mitsara kana mhinduro.
Post nguva: 2021-03-05